PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD. - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
09-8601659, 09-73030544, Website
About PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD.
PYI NYEIN THU မှ တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်သော ကွန်ဒိုမီနီယံများအား အောက်ပါ အရည်အသွေးများဖြင့် စံချိန်၊ စံညွှန်းမီစွာ အကောင်းဆုံး တည်ဆောက် ထားပါသည်။ ၄င်း ကွန်ဒိုမီနီယံများအား ရပ်နားထားခြင်းမရှိဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် တည်ဆောက်လျှက်ရှိပြီး၊ ကွန်ဒိုအားလုံးသည် ၇၅% နှင့်အထက် ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့် အသေးစိတ်ထပ်မံ ရှင်းပြပေးနိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီရုံးခန်းသို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
• Ground Floor Car Parking
• Generator, Transfomer
• PAPX Telephone Exchange System
• Fire Extinguisher in every unit • Underground Water Tank
• 24 Hours CCTV Security System
• Treatment Septic Tank
PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD. ၏ စီမံကိန်းအသစ်များ
Advertised by PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD.
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး7,877
PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD. | condo အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
Advertiser : PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD.
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ6း,676
PYI NYEIN THU CONSTRUCTION CO.,LTD. ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် - • Room B - 2253 SQFT DANATHUKHA CONDOMINIUM
Advertised by PYI NYEIN…
ဧရိယာ : 2253 sqft
• Room B - 2253 SQFT DANATHUKHA CONDOMINIUM
Advertiser : PYI NYEIN THU
ရောင်းရန် - • Room A - 2316 SQFT DANATHUKHA CONDOMINIUM
ဧရိယာ : 2316 sqft
• Room A - 2316 SQFT DANATHUKHA CONDOMINIUM